आ.इ.टि र आजको विश्व – Ranga Darpan
आ.इ.टि र आजको विश्व
आ.ई.सी.टि क्लव सुर्खत
सुचना प्रविधिको विकासले नेपाल जस्ता अल्पविकशित मुलुकहरुलाई शिक्षा ,स्वास्थ्य ,कृषि पर्यटन तथा व्यापार लगायत आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा दिगो विकास गर्न सुवर्ण अवसरहरु प्रदान गरेको छ ।
आजकोे विश्व सुचना र प्रविधिकोे हिसाबले निकै नैै अगाडी रेहेको कुरा हामिलाई सर्वविदितै छ । आ.इ. टि को माध्यमबाट नै आज तिस बर्ष भन्दा कम उमरेका युवाहरुले विश्व हल्लाइरहेका छन् । आज विश्वमा रहेका सात अरव जनसंख्या मध्ये एकैपटक करोडौ मानिसहरुका हातहरु मोबाइल तथा ल्यापटपका किहरुमा दौडीरहेका छन् ताकि फेसबकको भित्तामा , फेसबुकको स्थापना गर्दा मार्क जुकरबर्ग मात्र २२ बर्षका थिए । कसरी सम्भव भयो होला यो ! विश्वमा रहेका करोडपतिहरुको सुचि हेर्ने हो भने पनि अधिकांश विश्व धनीहरुको क्षेत्र आ.ई.टि नै रहेको पाइन्छ । घरमै बसि बसि विश्वको जुनसुकै ठाउको काम गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ जुन आ.इ.टि को प्रयोग बाट मात्र सम्भव भएको छ । सुचना प्रविधीको क्षेत्रमा आºनो भविष्य बनाउनको लागि कुनै निश्चित योग्यताको आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्दैन मलाइ , विश्वको तुलनामा नेपाल आ इ टि क्षेत्रमा केहि पछाडी परेको देखिन्छ, तरपनि हामी गुगोल र इन्टरनेटका माध्यमबाट जुनसुकै कुरा सिक्न सक्छौ र सिकीरहेका पनि छौ । नेपालजस्ता विकाशोन्मुख राष्ट्रहरुमा खुल्ला तथा दुर शिक्षा को निकै आवश्यकता भएको पाईन्छ, जुन आ.ई.टि को माध्यमबाट मात्र सम्भव छ । विश्वको जुनसुकै ठाउँहरुबाट शिक्षणसिकाई क्रियाकलाप गर्न सकिन्छ । आज विश्वको जुनसुकै कुनामा जस सगँ कुराकानी गर्नु पर्ने भएपनि एक सेकेण्डमै सम्पर्क गर्न सक्ने स्थितिको सिर्जना भएको छ ।
आजभन्दा केहि बर्ष अगाडि एक ठाउँबाट अर्कोे ठाउमा सुचना आदानप्रदानका लागि निकै अप्ठ्यारो अवस्था थियो । अच्चम लाग्थ्यो सञ्चारका सामाग्रीको सहायताले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा बोलेको सुनिन्छ भन्दा, तर बर्तमान अवस्थामा इन्टरनेट को माध्यमबाट आºनै घरको बन्द कोठामा बसेर एकैपटक संसार घुम्न सक्छौ, संसारमा भईरहेको गतिविधिको बारेमा जानकारी लिन सक्छौ, संसारको जुनसुकै ठाउँको काम गर्न सक्छौ । धन्य छ सुचना प्रविधिको विकास ।
आ.ई.टि. लाई नै जिवन जिउने आधार मानेर अगाडि बढ्ने मानिसहरु आज विश्वमा कैयौं अगाडी रहेको पाइन्छ । आज भन्दा मात्र दश बर्ष अगाडी आ.ई.टि को अवस्था हेर्ने हो भने विश्व धेरै पछाडी थियो । विश्बमा सबैभन्दा छिटो विकास प्रविधिको नै भएको छ । दिन प्रतिदिन टेक्नोलोजिमा परिवर्तन आईरहेको छ । आ.ई.टि सम्बन्धि ज्ञान नभएको मानिसलाई बर्तमान अवस्थामा जिवन निर्वाह गर्न गाह्रो हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । प्रविधिको तिब्र गतिमा भईरहेको विकासको क्रमलाई हेर्न हो भने अवको केहि वर्षपछि खाने, बस्ने, हिडडुल गर्ने समेत कार्य कम्प्युटरको माध्यमबाट नहोला भन्न सकिन्न ।
आज विश्वमा मानिसले जस्तै काम गर्न सक्ने हिडडुल गर्न सक्ने, बोल्न सक्ने कृत्रिम उपकरणहरु बनिसकेका छन । मानिसले जस्तै सबै काम उपकरणले गरिदीएपछि मानिसको अस्तित्व के त ? विश्वमा रहेका जतिसुकै सुरक्षित सुचनाहरु छन सबै एक कम्प्युटर सर्भरमा भन्डारण भएका छन् । प्रविधि क्षेत्रमा जतिसुकै विकास भईरहेका छन त्यति नै अपराधिक कार्य पनि भईरहेका छन् । यदि कुनै ह्याकर कम्युटर सर्भरको सिस्टममा प्रवेश मात्र गरेमा वा सर्भर फेल भएमा विश्वभरका मानिसहरुको गोप्य सुचनाहरु एकैपटक नष्ट हुन सक्छन । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दा निकै ध्यान दिन आवश्यक देखिन्छ । आज विश्वमा रहेका जतिसुकै मानिसहरुको जति आयश्रोत छ बैंकिङ सिस्टममा आधारीत रहेको छ जहाँ पुर्ण प्रविधिको प्रयोग भईरहेको छ ।
प्रविधिको व्यापक प्रयोगबाट कानुनको शासन, भ्रष्टचारयुक्त, चुस्त र दु्रस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण, आर्थिक अनुसाशन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह र श्रोतको कुशल व्यवस्थापन जस्ता असल शासनका आधारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गरी सर्बसाधारणले पाउनु पर्ने सेवा छिटो छरितो तथा कम खर्चिलो ढङगबाट प्रदान गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा, सुचना प्रविधि विश्वमा विभिन्न मुलुकहरु लगायत नेपालको भौगोलिक विषमताबाट सिर्जित विकासका पुर्बाधारको रुपमा समेत स्थापित हुन सक्ने देखिन्छ ।
विश्वका केहि मुलुकहरु लगायत नेपालमा पनि प्रविधिको विकासले गर्दा रोजगारका मुलहरु फुटाइदिएको छ । आज नेपालमा अ.इ.टि सम्बन्धि दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको छ । वर्तमान परिपे्रक्ष्यमा रोजगार आई टि पढेको मानिसले खोज्ने नभएर आइ टि सम्बन्धि दक्ष जनशक्ति रोजगारले खोज्दै आइरहेको छ । नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलुकहरुमा बस्ने हामीहरुले आ.ई टि के हो? भनि बुझ्न जुरुरी छ । आज दिन प्रति दिन करिब पन्ध्र सय नेपाली युवाहरु रोजगारको निम्ति विदेशिईरहेको अवस्था छ । त्यस्ता युवा शक्तिलाई नेपालमै रोक्नका लागि नेपाल सरकारले प्रविधि क्षेत्रमा गम्भिर भएर सोच्न र लगानी गर्न आवश्यक देखिन्छ । आजको समयमा आईटि क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति को खिचातानि भईरहेको छ । आ.ई टि सम्बन्धि थोरै मात्र ज्ञान भएको मानिसले पनि बेरोजगार बस्नु पर्ने अवस्था छैन । विश्वमा जति सुकै नयाँ आविस्कारहरु भईरहेका छन सबैमा आईटिकै प्रयोग भएको पाईन्छ ।
आजको विश्व प्रविधिमय बनेको छ । सुचना प्रविधिको विकासमा अघि बढेका मुलुकहरु धेरै अगाडी पुगिसकोका छन तर यसमा पछि परेका मुलुकहरु धेरै पछि छन । आ.ई.टि ले व्यक्ति समाज राष्ट्र र समग्र विश्वलाई नै अवसरका मुलहरु फुटाईरहेको छ साथसाथै यसको गलत प्रयोजनको कारणले भयानक विकृतिहरुको पनि सृजना भईरहेकै छ । यद्दपि हामिले यसलाई प्रयोग विहिन वनाउन भने सक्दैनौ तसर्थ नैतिक तथा कानुनि रुपले प्रविधिबाट सृजित नैतिक तथा कानुनि अपराधहरुलाई नियन्त्रण गर्दै प्रविधिमैत्री वातावरणको सृजना गरेमा र यसलाई राष्ट्र निर्माणका विविध आयामहरुमा लगाउन सकेमा हाम्रो लगायत विश्वका अनेकौ पछि परेका राष्ट्रहरु छिट्टै प्रगति पथमा लम्किनेमा कुनै दुईमत छैन ।
अन्जुपन्त अमेरिकाको टेलसमा विधुतिय पत्रिका संग अन्तर्वार्ता गर्दै ,,